Algeria, Morocco oo hadal qaadka daroogada isku seegay - BBC News Somali
Algeria, Morocco oo hadal qaadka daroogada isku seegay
Dawladda Morocco ayaa dib ugu yeedhatay danjiraheeda u fadhiya Algeria, ka dib markii wasiirka arimaha dibadda ee Algeria ku eedeeyey banigyo laga leeyahay Morocco in ay "may dhaamaan" lacagaha daroogada.
Wasaaradda arimaha dibadda ee Morocco ayaa sheegtay in ay sidoo kale u yeedhay sii haya xilka danjire ee safaaradda Algeria ku leedahay magaalada Rabaad si ay ugu gudbiso cabasho rasmi ah oo ay ka qabto "hadalladaa khatarta badan ee dhaawacaya siyaasadda boqortooyada Morocco ee Afrika".
Wasiirka arimaha dibadda ee Algeria, Cabdilqaadir Musaahil, ayaa shalay Jimcihii hadalkaa ka sheegay shir ay bankiyadu ku lahaayeen caasimadda dalkaas.
saga oo ka hadlaya sababta uu kor ugu kacay maal gashiga bankiyada Morocco iyo tartanka ay kula jiraan kuwa Algeria ayaa wuxu yidhi "cid kastaa way ogtahay in bankiyada Morocco ay may dhaamaan lacagaha daroogada, xogtaana waxaan ka helay madax badan oo Afrikaan ah." waxaanu intaa ku sii daray oo yidhi "shirkada diyaaradaha ee Morocco rakaab keliya ma gurto".
Wasaaradda arimaha dibadda Morocco waxay sheegtay in hadalkaa wasiirka Algeria "ahaa mid masuuliyad darro weyni ka muuqatay oo aan hore u soo marin taariikhda xidhiidhka labada dal, sababna ay u tahay in wasiirkaasi ka indho saabtay xeerarka iyo sharciyada u yaalla bankiyada iyo shirkadaha diyaaradaha Morocco".
Hase yeeshee waxa la sheegaa in woqooyiga dalka Morocco laga beero xashiishadda loo dhoofiyoYurub. Laakiin inkasta oo sharciga dalkaasi xaaraantimeeyo isticmaalka xashiishadda, aanu dambi ka dhigayn in ay beeralayda dalkaasi beertaan.